Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe nke REI na-ebu? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Rei trek anyịnya igwe - akwụkwọ ọgụgụ zuru ezu
Rei trek anyịnya igwe - akwụkwọ ọgụgụ zuru ezu
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe nke REI na-ebu?
REI na-eburuugwuanyịnya igweN'eluụdịdị ka Cannondale, Salsa na nke anyị Co-op Cycles.
(Ndị mmadụ na-enwe a )ụrị) - Ndewo, ndị hụrụ egwuregwu n'anya. Colin, ebe a na Kelsi na Mooca Liets Veldrijden Cyclocross Race, ebe ndị na-agba ịnyịnya na-asọrịta mpi megide ibe ha na mpi obi ike) Are dị njikere maka cyclocross? - N’ikpeazụ ihe ịma aka. Ichere m na-emeri? - Kedu ka anyị si abanye n'ọnọdụ ndị a? - Nnọọ na Fort Steilacoom.
You gaghị achọ ichefu na oge ọbụla.- Mba- Passgafe nwoke na jeans.- Ọ nweghị ihe dịka cyclocross iji mee ka ọ dị gị ka nsogbu adịghị.
Gbọmgbọm-Roll? -Farrel-Roll! Mere ya! Gon chọrọ ịgba breeki kwesịrị ekwesị. Aka ekpe rie shit. Ọ dị mma.
Echere m na anyị dị njikere Kel. Ọ dị mma, anyị nọ ebe a na agba ọsọ mbụ anyị na-agba ọsọ, ma anyị na-abịakwa ụfọdụ uru. Kedu aha gị? - Ee-tchee.- Ndewo Ee-tchee.- Na.- Kay-lee-na.- Gini ka i bu? Na-ele anya ma ọ bụ agbụrụ izizi mbu nke cyclocross? - Ee e, anyị na-eme cyclocross ruo afọ ole na ole - Lee, agwara m gị - Ya mere, anyị bụ ndị rookies ebe a - Ọ dị mma, ihu egwuregwu - Ka anyị tụfuo anyịnya igwe anyị? na ngwungwu a? - Echere m otu ahụ.- Abịa na-ekpo ọkụ.- Ka m kee okpu agha anyị. - 343.- you sọsọ asọmpi na cyclocross na mbụ? - Ee.- Atụmatụ ọ bụla, nke a bụ agbụrụ mbụ anyị banyere cyclocross.- Ee nke a bụ oge mbụ anyị mere ya - naanị gaa ebe ahụ ma mụọ ya.
Naanị ịme aka ole na ole ka ị wee nwee obi uto maka usoro ahụ tupu ọ malite - Right. - Ozugbo - Kedu ihe kachasị sie ike? - Ee, akụkụ kachasị sie ike nke usoro a? - Ah, ikpeazụ nkeji iri. (ịchị ọchị) (egwu rock) - Ọ dị mma, ka anyị gbadata. - Oh chi m, ụkwụ m na-egbu mgbu nke ukwuu - Colin na Kelsi ebe a na Zack na Terry, ndị ga-enye anyị nkọwa ụfọdụ banyere ihe na-eme na cyclocross.
Otu ajụjụ m tụgharịrị uche bụ, 'Gịnị bụ akụrụngwa m ga-achọ' ka m wee bụrụ? onye na-agba okirikiri? '- Ya mere, o doro anya na ọ dị ezigbo mkpa ịnwe igwe kwụ otu ebe, Colin. Na mgbakwunye, enweghi ọtụtụ uwe chọrọ. Okpu agha, n'ezie.
Mgbe ụfọdụ, ọ bara uru ịnwe akpụkpọ ụkwụ ị ga-agba ọsọ, yabụ kama nwee akpụkpọ ụkwụ n'okporo ụzọ, nwee ụdị akpụkpọ ụkwụ ị nwere ike ịgba ọsọ, dị ka akpụkpọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe. Ma ọ bụ ọbụna akpụkpọ ụkwụ tenis nwere ike inyere aka na cyclocross. - Otu nwatakiri kwuru na ha bu nani ha n’elu igwe kwụ otu ebe, achọpụtara m na mụ na Colin nwere igwe kwụ otu ebe abụọ ndị na - adị oke iche.
M bụ igwe kwụ otu ebe na nke ya bụ igwe kwụ otu ebe na -. Ya mere, igwe kwụ otu ebe gbanwere dị ka igwe kwụ otu ebe, mana ohere karịa maka taya buru ibu, ogo buru ibu n'ihe metụtara triangle, yabụ ọ dị mfe iburu ma bulie igwe kwụ otu ebe - elu na ala. (Grunt) You na-eyi nke gị dị ka mkpọ. - Olee otu ị si eme ya? - Dịka ọmụmaatụ, ịnyịnya ígwè gị agaghị enwe ike ijikọ n'ihi na ị naghị eme ya.
Na-enweghị ụlọ iji kwụrụ ubu gị. N’akụkụ ka ukwuu, mgbe ị rutere n’akụkụ dị larịị nke na-agaghị agba ịnyịnya, ọ na-adị ngwa iji ụkwụ ụkwụ igwe kwụ otu ebe. Ọ na-akacha mma ịpụ ya n'ala karịa ịkwanye ya.- Achọrọ m ewu.- Ọtụtụ mmadụ nwere igwe kwụ otu ebe na ọ bụ ụzọ dị mma isi pụọ ma bido.
Ka ị na-aga n’ihu ma nwekwuo mmasị n’egwuregwu ahụ, ị ​​ga - enwerịrị ike ị ga - enweta ọsọ na nka gị site na iji igwe kwụ otu ebe - Ọ ga-adị mma, echere m na nke a bụ agbụrụ igwe kwụ otu ebe, gịnị kpatara m ji agba mgba maka ịgba ọsọ? - Ya mere akụkụ nke cyclocross na-apụ na igwe kwụ otu ebe ma na-eche maka ngalaba ebe ị ga-enwe ike ịgba ọsọ ọsọ ma ọ bụ gaa ngwa ngwa - Nke a bụ ihe mgbochi! - Yabụ enwere ụfọdụ ngalaba egwu ahụ ị nwere ike ịchọta onwe gị ka ị pụọ n'ike, ma ọ bụ nkpoda dị elu ma ọ bụ ihe ị na - enweghị ike ịfefe dị ka plank - ogige ndị a gbadata n'apata m - ọtụtụ agbụrụ na - eji okpukpu abụọ nke a na-akpọ ihe mgbochi plank ihe dị ka sentimita 16 n'ogologo. Ha ga-anọkwa ihe dị ka ụkwụ iri abụọ na abụọ. Yabụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ ga-abịa, ga-apụ, gafere ihe mgbochi ahụ wee laghachi.
dịkwuo ịnyịnya ígwè
N’ọsọ cyclocross nke oge a, osisi ndị ahụ na-anọchi anya ogwe osisi nwere ike ịda. Ọzọkwa, ugwu dị ebe ahụ n'ihi na ha bụ naanị akụkụ nke usoro ahụ - nke ahụ bụ akụkụ siri ike. Echere m na ọ bụ GoPros na-ebu m arọ. (ọchị) - Na ihe mara mma banyere cyclocross bụ na mgbochi ndị a na ọdịiche dị n'okike nke usoro ọmụmụ na-eme onye na-agba ịnyịnya ịme mkpebi ma kpọọ egwuregwu a nke egwuregwu Hess megide usoro ahụ. (egwu di egwu) - Isi ihe na-eme ka ị bụrụ ezigbo onye na-agba ọsọ? Bụrụ nke kachasị mma. - kilomita ndị a na ọkara dị ka kilomita 10 ugbu a. - Anyị na Monica Lloyd nọ ebe a taa, onye mmeri mba nke klas nke afọ 40 ruo 44.
Obi dị m ezigbo ụtọ ịnọnyere gị. Kedu ndụmọdụ ọzụzụ ị nwere ike inye onye mbido ka ọ bụrụ onye mmeri nke mba? - Nwanne m nwanyi b gbaara okacha mgba nke mere o nyere m otutu ezigbo ndumodu. Nke mbụ bụ ịgba ịnyịnya ígwè karịa - ndị a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ - anaghị m agba ịnyịnya igwe n'ihe dị ka afọ 20.
nyocha igwefoto 2019
N’afọ gara aga, agbaara m ịnyịnya ígwè m ugboro atọ. Abụọ n'ime ha na asọmpi - m kwuru, sị, 'Ya mere, ole ka m ga-anya?' O wee sị, 'Ọfọn, ọ bụrụ na ịnwere ike ịnya ụgbọ ala ụbọchị atọ n'izu' ma ọ dịkarịa ala nwetakwuo ya nsogbu, 'nke ahụ bụ mmalite dị mma.' - Achọrọ m nkọwa ụfọdụ ebe a, Monica.
Say na-ekwu obere ihe na draịva, gịnị ka ọ pụtara? - Ọfọn, ụdị nke siri ike dị ka i mere n'ọsọ ahụ. - (na-ekpo ume) Ọ dị mma. (grunts) (were ume miri emi) Nke ahụ bụ nnukwu ọrụ.
Nke ahụ bụ nnukwu ọrụ. - Ọ dị mma, ị nwere ndụmọdụ ndụmọdụ ikpeazụ ọ bụla tupu anyị aga agbụrụ anyị? - Echere m na ọ dị ezigbo mkpa ka ndị mbido ghọta mgbe enwere ihe na-eme ka obi ghara iru ha ala na ọ na-atụ ụjọ, ọ dị mma ịpụ ma jee ya - ọ nweghị ụzọ m ga-esi gba ịnyịnya ígwè m gbadata n'ugwu a - n'ihi na nke ahụ ga-abụ ụzọ kasị dịrị nchebe maka gị. Ma ọ bụrụ na ị merụrụ ahụ, ị ​​nwere ike ị gaghị alọghachi n’onwe gị. - Well, daalụ, Monica.
Colin na Kelsi wee banye ebe a. Anyị ga-ebido agbụrụ anyị n’oge na-adịghị anya. - Lee gị na egwu! - Nwee anụrị! - Ọ dị mma ụmụ okorobịa, unu lezie anya maka nọmba 1256 n'ihi na nke a bụ Colin ebe a - nke mbụ n'ime obi unu! - kedụ ka Colin mere? - ezigbo ụjọ. ezigbo, ụjọ, na - atụ ụjọ - ha na - ekwu na ha ga - azọpụta ha ọ kachasị mma maka Ọfụma, Colin na - agba ọsọ a ugbu a. (Cowbell yiri mgbaaka) Colin, ị nwetara ya! - Ma lee ya, rookie.
Nke a bụ agbụrụ mbụ maka mmadụ niile. Ma lee, ị na-aga ogologo na pedal. - Oh, wetuo. (Na-eku ume) guysmụ okorobịa a, ụmụ okorobịa a dị mma, ka anyị gaa, ka anyị lawa, daalụ! (Cheers) - Ahụrụ m Colin! Ọ na-emecha ụkwụ mbụ ya. - Gburugburu abụọ.
Amaara m ụzọ. Ama m ihe m na-eme. Naanị m ga-egwu ala.
Oh ee anyị na-aga obere ala! Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ahụ. - Lee, ọ bụ Colin! (cheers) Oh, ọ na-atụgharị uche .- Ndị a bụ ndị m.
Ndi mmadu! Lee anyị, na-agbaru. Nnukwu ukwu! (Cowbell yiri mgbaaka) - Agbụrụ mbụ nke ndụ ya, mere. - Lee, ị chọrọ biya? - Ee! Enwere m biya mmadụ! Yabụ na ọ dị ka cyclocross na-ewu ewu ebe a na northwest, mana ebee ka anyị si ebe a? - O doro anya na akpa ego na-ekpo ọkụ na US ebe enwere akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke cyclocross.
Boston, ebe dị na Bay Bay. Ebe niile a na-aga ịgba ọsọ cyclocross ruo ogologo oge - ha nwere m na Pockets na-ekpo ọkụ - ihe dị jụụ banyere cyclocross, ị nwere ike ịga obodo ọzọ wee lelee ime obodo ma hụ otu akụkụ mba ọzọ si eme cyclocross. - Kelsi, ị nọ ugbu a na oche ikpeazụ.
Nke a bụ otu oche ebe m nọ! - Zọpụta ndị kasị mma n'ihi na ikpeazụ! (Cowbell yiri mgbaaka) - Lee ị gawa, Kelsi! Ka a pụọ! - Nke ahụ bụ nzuzu. - Ee! Ihe niile gbasara ọchị ahụ! - Kelsi kwesịrị ịbịa oge ọ bụla - Nke a bụ nzuzu, Colin! - Grace n'okpuru nrụgide - Nke a bụ karịa ije m - I nwetara ya, Kel! - A na-agba ọsọ ahụ maka onye ọ bụla! Gaba gawa! - heard nụrụ ihe niile ebe a mbụ, ụmụ okorobịa. Nke a bụ Colin na Kelsi, ndị na-abanye na cyclocross.
Chetakwa, debe pedal na igwe. - Kedu ụbọchị! - Ama m. Ma nke ahụ bụ njedebe nke cyclocross --- Ma nke ahụ bụ otu kuki si emebi.
Echere m na anyị dị ezigbo mma. - M pụtara, ị dị ezigbo mma. - Ì chere na anyị nwere ọdịnihu n’ọgbọ egwuregwu a? ? - Eh, ikekwe ọ bụghị.
Enwere m ike ịrapara n'ọrụ anyị nkịtị - Kọọ na cyclocross? - Ee, nọgidesie ike na cyclocross - Ee, ọ ga - abụ na ọ ga - adị mma.
Ndi igwe gbara agba REI di nma?
Ee,EZEMmekọrịta okirikirianyịnya igweejiriogon'uche ma wuru ka ọ dịruo. Co-op Cycles na-eme obere ugwu na etiti-nso ugwu na ụzọanyịnya igwe. Ha dị mma maka ndị mbido, ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ndị na-emega ahụ ike, na ọbụna ndị na-agba ọsọ na-amu amu.
Hey ọzọ, nabata na ọwa taa m ga-achọ ịnye gị nkọwa dị mkpirikpi nke igwe igwe igwe DRT 1.1. Nke a bụ REI nanị igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụ akara ọhụrụ ha nke ewerela ọnọdụ nke akara Navara ha, igwe kwụ otu ebe na-akwụkarị $ 499, mana ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma dị ka m, ị nwere ike ịchọta ya na ire ere ugbu a maka $ 425. Ihe a mara ezigbo mma, ịbụ na-eme ihe n'eziokwu, M ga-abụ na obi dị m ụtọ ma ọ bụrụ na m na-akwụ ụgwọ zuru price ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ ihe karịrị zuru price ka ka na-amalite na positives nke igwe kwụ otu ebe, karịsịa jiometrị ala otu Top tube isi nkuku nke super obosara aka na dị nnọọ n'ozuzu obi na-adị ebe a ọ bụ ihe na-atọ ụtọ nke ukwuu na ị maara dollar anọ ma ọ bụ narị ise enwere m ike ịchọta ihe ọ bụla dị nso dị ka igwe kwụ otu ebe a, aka ndị ahụ dịkwa mma nke ukwuu na e nwere 760 milimita obosara aka na ihe sitere na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere 180 millimita n'ihu 160 millimita azụ mmanụ ụgbọ ala hydraulic hydic ulic na ebe ha abụghị breeki dị oke ọnụ na ahịa ihe ndị a na-arụ ọrụ masịrị m oge ọ bụla m na-agba ịnyịnya ígwè a ka etu brakụ si arụ ọrụ ugbu a ụgbọala n'onwe ya ọ bụghị ihe kachasị mma ị maara na ọ bụ ab illiger threesome site na shimano setup ya nwere acerra derailleur na eltis n'ihu na mgbe ahụ cera Turner shifters, ọ bụ ezie na ha dị ọnụ ala ha na-arụ ọrụ nke ọma ọnụ m enwebeghị nsogbu na dobe agbụ n'ihi na gia nke a Ihe Ha maara na ọ bụ eziokwu, ọ na-esi n'aka ha naanị nsogbu m nwere na draịntin bụ mgbe m na-arụ ọrụ teknụzụ ma ọ bụ na teknụzụ ị maara n'ezie ihe ọka iwu Rudy bụ na ọ na-esiri m ike ịchọta ezigbo gia ịnọ n'etiti, ịmara ka esi eji aka ekpe gị tụfuo ka ị na-eji aka nri gị na-agba iji nweta ngwakọta uhie ahụ ugbu a? Echere m na ihe a ga-erite uru site na ịmara banyere otu n'ime iri ma ọ bụ otu na iri na iri na otu ụgbọala, mana maka ọnụahịa ị nwetara ihe a, iwe anaghị ewe m. Ma ụgbọala ahụ bụzi otu n'ime nnukwu ntụpọ igwe kwụ otu ebe a. eji ihe ị ga - ahụ anya bụ na m kwalitere n'ezie na Son Tour Epic'son ikuku mmiri, mana ihe a na - abịa na Son Tour xct na ya na ihe a bụ tank ọ na - ada ụda ọ naghị ada ụda nke ọma ma akpọ m asị Akpọrọ m ihe niile gbasara ndụdụ a ugbu a ọ bụ ndụdụ dị ọnụ ala ọ na-abịa n'ọtụtụ igwe kwụ otu ebe ị maara na ị nwere ike iburu ya maka amaghị m $ 50 ebay eleghị anya obere ka enweghị m atụmanya dị elu maka ya mana m mere O wutere m nke ukwuu na ndụdụ a were m iwe ozugbo m gbanwere ya maka ụwa a niile nke ọdịiche ma ọ bụrụ na ị lee igwe ahụ anya, ị ga-ahụ ee, enwere m oghere dị iche na ebe a, ugbu a emeghị m n'ezie na nzube.
O di nwute na, na oge mbụ m zụtara igwe kwụ otu ebe bụ mgbe mbụ m zụtara igwe kwụ otu ebe iji na-ekpo ọkụ ọkụ chụpụrụ si igwe kwụ otu ebe, ị maara na m dislocated m shanks, ndị agadi dọwara ụkwụ m na-emeghe na N'ezie ebibi rim. Agaghị m atụ anya na ọtụtụ wiil ga-anagide ụdị ujo a ka m wee ghara imebi ụkwụ ahụ, ma e wezụga eziokwu ahụ na enwere m mmasị na wiil mbụ na igwe kwụ otu ebe a, enweghị nchekasị ọ bụla na ha enweghị nsogbu ha. 'gbanwere ha, ọ bụrụ na anaghị m agbajikwa ha maka oche nke na-abịa n'ụgbọ ịnyịnya a, ọ bụ n'ezie ọmarịcha oche mara mma ugbu a, ị ga-ahụ na m gbanwere nke m na akwa akwa naanị ihe kpatara m ji chọọ onye ọhụrụ Sitnọdụ ala na abụba m igwe kwụ otu ebe na m chere na m na-egbu nnụnụ abụọ na otu nkume, nke a dị mma nke ukwuu maka njem dị anya, nke m na-eme igwe kwụ otu ebe a ma e jiri ya tụnyere nke bịara ya, ọ bụ ezie na ọ dị mma mgbe ị matara 810 Miles, ọ na-amalite n'ezie na-eyi gị ka m wee tinye na na abụba igwe kwụ otu ebe na m na-emekarị nnọọ rutere ebe ị maara, ise kilomita isii na trainie rt mma niile oche m ga-adịghị swapped ya ma ọ bụrụ na m na-adịghị mkpa onye na agbanyeghị na pebbles na-abịa na igwe kwụ otu ebe ha na-na ọ bụ kpọmkwem ihe ị na-atụ anya na a $ 400 igwe kwụ otu ebe, otú nwere ọnụ ala pla stic mkpara na-ewu na-ngosiputa na-adịghị eche banyere ha na ha yiri ka ha na-agbaji mara mma mfe ugbu a, ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ nọkwasị ihe a na super adụ ụzọ ụkwụ ị maara ihe n'ezie flowy ihe ọ bụla ike ma ọ bụ ọbụna arapara ihe ndị a pedals ga-arapara n'ahụ m ugbu a ma eleghị anya m na-eme nke ọma m na-agba ịnyịnya mara mma ma achọrọ m ihe na-eme m ka ọ dị m ka m na-arapara igwe kwụ otu ebe, yabụ m na-agba ịnyịnya BMX, ndị a bụ anụmanụ Stephen Hamilton pedal na ha bụ alloys with the pinable serviceable and these things bite, yabụ enwere m mmetụta nke ukwuu ma nwekwaa mmasị na igwe kwụ otu ebe ka m na-agba ịnyịnya ụkwụ ndị ahụ ugbu a na dollar iri anọ na anọ m nwere gbalaga mgbe a bịara n'ịchọ ịnyịnya ígwè. Agbalịrị m ọkachamara Refeyim na Diamondback na nke a na nke igwe kwụ otu ebe niile m na-agbago nke a nwere ike ọ bụghị nke kacha dị egwu, mana n'ozuzu ihe a na-eme nke ọma karịa ihe ọ bụla ọzọ m nwetara na brek na nke m nke a nwere ihe ugbu a pụtara n'ebe ọtụtụ n'ime ndị ọzọ maka ihe m kwụrụ maka igwe kwụ otu ebe maka ihe m tinyere n'etiti ndụdụ ahụ, taya na ihe dị iche iche dị na igwe kwụ otu ebe bụ uru zuru oke nke a bụ nnukwu nsogbu maka ego gị, ọkachasị mgbe ị na-amalite mana ị maara realriding na-atụnyere tinkering na anyịnya igwe na nke a bụ nnọọ oké mmalite bụ ihe i nwere ike nọkwasị ruo nwa oge na-eme ụfọdụ upgrades na mgbe emecha ịgbanwee ọzọ igwe kwụ otu ebe
Rei nwere mee njem?
REI nwerebụrụ naanị onye na-ere ahịa US maka Accell Group's Ghost brand kemgbe 2014.REI nwerechọrọ ogologo ogeigwe kwụ otu ebegosi na ọ nwere ike ịnye ebe niile. O kwuru na enweghị atụmatụree Trek anyịnya igwesite naEZE. Bontrager akụkụ & ngwa ga-adị naEZEmalite na Machị 14.28bọchị 28 2019
Ka anyị nwee ezigbo mkparịta ụka gbasara trek trek, mkpịsị ụkwụ trekk ma ọ bụ ịghara ịgagharị okporo osisi, nke ahụ bụ ajụjụ. Nke a bu ihe ngosi m, idi nma m. Oh nke a bụ ihe kachasị ike m meworo na ndụ m. (Beep) Kedu ihe bụ Enyi, Achọrọ m Miranda na achọrọ m ikwu maka okporo osisi trek. Na-ekwu okwu banyere ụfọdụ okporo osisi trekk. (Obi ụtọ na mba music) Oh, nke ahụ siri ike maka Hill.
Ọ dị mfe ibili, nọdụ ala. Oh, ikpere gị na-afụ ụfụ, nke m abụghị n'ihi mkpanaka m na-eme njem. (Beep) Enwere m mmetụta na n'okike na enwere nghọtahie ma ị chọrọ mkpịsị ụkwụ ma ọ bụ na ịchọrọ, yabụ achọrọ m ịtọ ndekọ ahụ ugbu a, ma kwuo okwu ọ bụghị naanị banyere oge ị kwesịrị iji mkpịsị ụkwụ trekk kamakwa otu ị kwesiri iji ha.
Eziokwu na trekking okporo osisi bụ na onye ọ bụla dị iche. Site n'iji mkpanaka ejikere trekk, ị nwere ike inye aka kesaa ibu dị na ụkwụ gị, gafee ubu na azụ, wee dịrị ka ewu. (Ewu baas) obere nwa ewu. (Ewu baas) kwụsie ike.
Dabere na ihe ị na-eme na ala gị ma ọ bụ ibu ole ị na-ebu, ọ nwere ike ime nnukwu ọdịiche na nkasi obi backpacking gị. Ogwe osisi Trekking. Ikgba ọsọ bụ isi mgbatị ahụ.
Ogwe osisi Trekking na-eme ka ọ bụrụ mmega ahụ zuru oke. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị nwere otu rivergafe osimiri, okporo osisi ndị na-eme njem dị oké mkpa iji kwụsie ike na mmiri, okporo osisi ndị na-eme njem pụkwara ịba uru ma ọ bụrụ na ị na-eji tarpaulin ma ọ bụ chọọ ya ịtọ ụlọikwuu gị, ma o doro anya na ị nwere ike iji ha were nkwụsịtụ mgbe ị na-egwu egwu You agbaji ụkwụ ma ọ bụ ihe. Enweghị m ike ịkwado nke ahụ, mana m nụrụ na mkpanaka trek. (Miranda burps) Ndo.
Naanị ndụmọdụ ole na ole maka ịnyịnya na ndị enyi m. Mgbe ị na-eji mkpịsị ụkwụ gị, ị chọrọ ka aka gị gbagoo site na eriri wee banye na njikwa ahụ. Nke a bụ naanị ka ị tuo eriri nke trekking n'etiti aka gị na aka na ala nke osisi gị ga-elongate.
Ọtụtụ n’ime ha nwere nọmba ma ọ bụ ebe na-ekwu Halt. Yabụ ịgbatị ala nke osisi treki gị ruo ebe ahụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịhazigharị akụkụ etiti ahụ. Wantchọrọ ogologo ogologo osisi trekk gị ka ogwe aka gị wee nọrọ na ogo ogo 90 mgbe ị na-eje ije.
Nke a pụtara na okporo osisi gị ndị na - eme mkpatụ ga - adị ntakịrị karịa mgbe ị na - arị ugwu ma ọ ga - adị obere karịa ma ị rịdata. (Beep) 90 ogo n'akuku site na eriri, nwee mmetụta dị mma, nwee mmetụta nke siri ike, na-arụ ọrụ nke ọma, jiri aka m niile na-awagharị n'okporo ụzọ a. (Beep) N'ikwu ya, mgbe ị na-eji mkpanaka trekk, ịkwesịrị ịmara ebe ị na-etinye ha dịka anyị maara ebe anyị na-aga.
Etinyekwala ụkwụ gị ebe ha na-anọghị, etinyekwala mkpanaka gị ndị na-eme njem ebe ha na-anọghị, ọ bụrụhaala na a na-eji baton eme ihe nke ọma, ha agaghị ebute mbuze ọzọ na ụzọ emegoro mbụ, mana ọ bụrụ ị na-eme mgbe ịnwe okporo osisi gị, ha agaghị akpata mbuze ọzọ Platụkwasị na mpụga ụzọ akpọrọ aha gị na-enye gị ohere ịde oghere nke nwere ike ịnakọta mmiri ma bulie mbuze. Emela ka obosara ya, jidesie ya ike. (Bells ring) Ezigbo mkparịta ụka, mkpagharị trek. (egwu dị egwu) n'ihi ya, kpachara anya mgbe ị na-eji okporo osisi trekk ma cheta na e nwere ụfọdụ ebe dị nro ebe iji mkpanaka eji eme njem anaghị abụ ezigbo echiche.
Ọ bụrụ na ị nọ n'oké okwute ma ọ bụ n'otu ebe ebe mkpanaka osisi gị ga-akụ ọkọ, nke a dabara n'otu echiche ahụ ịhapụ akara ọ bụla ebe ị na-achọghị ịdọta ahịrị ma ọ bụ mebie ụzọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ otu a, ịnwere ike ịnweta ndụmọdụ roba maka okporo osisi gị mgbe niile, mana ọzọ, gbalịa ka ị ghara ịbụ onye na-elekọta anụ ụlọ. Ọzọkwa, egbula osisi.
Echere m na nke a na-ekwughi, mana akwụsịla osisi na okporo osisi gị. Ndị a bụ ọnọdụ mgbe ịkwesighi iji mkpanaka trekking. Ọ bụrụ n’ịchọta onwe gị na usoro ihe na-emebi emebi nke nwere osisi na-eme mkpị nke na-emebi gburugburu ebe obibi, ejikwala ha, ọ bụrụ na akpa gị na-agbakwunye ụma ọzọ, ebula ha.
Ọ bụrụ na ọ kachasị dị larịị ma ị naghị ebu nnukwu ibu, ebulata mkpanaka trekking. Maka ndị gị na-ele anya, oopsie, maka gị nke na-enweghị mmasị na mkpịsị ụkwụ, okporo osisi anaghị ebibi ụzọ. Ndị na-aga n'okporo ụzọ a kụrụ akụ na-ebibi ụzọ ka ị kweta na ị gaghị! Amachaghị m ma ọ bụrụ na mmadụ chọrọ okporo osisi trekking ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ọ dịghị mkpa ikpe onye ọzọ ikpe naanị n'ihi na ha na-eji ihe ị na-ejighị eme ihe. K'anyị niile kwenye ịbụ enyi na ibe anyị ma kweta na anyị niile nwere ahụmịhe njem anyị. (Beep) Trekkingstock, trekkingstock, de, de, de, de, trekkingstock (mkpọtụ) Ya mere, anyị edoziela arụmụka banyere ma ị ga-agbaso nyocha ma ọ bụ na ị gaghị? Eleghị anya ọ bụghị.
Enweghị ee ma ọ bụ ee e azịza maka ajụjụ a. Ọnọdụ ọ bụla dị iche. Dị ka ọ dị na mbụ, sọpụrụ ndị ọzọ n'okporo ụzọ dị n'èzí.
Y’oburu n’inwere uche gi banyere ogwe osisi trekk, mee ka m mara na ihe ndia n’okpuru. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, pịa dị ka, gaa n'ihu ma denye aha na m ga-ahụ ụmụ okorobịa nọ ebe ahụ. (ụda egwu dị egwu) - You're bụ Miranda.
Abụ m Miranda. Ọ bụ keisi ocha, nri? Odi nma, ka anyi kwuo maka ihe, ama m banyere Dragon Ball.
REI nwere ire ere igwe kwụ otu ebe?
N'ihi na ọtụtụ mmadụ na-atụgharị na njem ịnyịnya maka ụfọdụ ọrụ n'èzí mgbe ha nọrọ n'ụlọ,EZEna-enye ọtụtụọrịrenaanyịnya igweenwere ike iziga gị n'ụlọ gị site na ntuziaka maka ọgbakọ.Eprel 22 2020
Edemede a bụ Dash Line na 1935 ọ siri ike ịchọta ezigbo anyu mmiri, ma ọ dịkarịa ala Marion LloydAndersen mgbe ọ kpebiri ịhapụ onye etiti ahụ wee nweta otu ezigbo mma anyụ si n'aka ndị na-emepụta Austrian maka ọnụ ala nke atọ. dollar na iri ise site na iji akara iji zụta n'aka, di na nwunye ahụ na-aga n'ugwu, mana n'oge na-adịghị anya, ndị enyi ha chọkwara otu ihe ahụ na-adịghị ọnụ dị ka Andersons, n'ihi ya, di na nwunye ahụ hiwere Recreational Gear na 1938 iji nyere ndị enyi ha aka inweta n'èzí dị ọnụ ala, na-adịte aka. Gia Mana enwere ihe puru iche banyere ihe mejuputara dika REI site na ndi mmadu nke ndi komunizim na echiche ndi mmadu banyere nbili Marion LloydAnderson malitere ndi otu ndi otu ndi enyi ha kwụrụ ụgwọ $ 1 iji wuo ụlọ ahụ. na-eto eto ụlọ ọrụ maka Andersons na nloghachi, nwere ike ịzụta ngwa ọrụ ka mma maka ndị otu $ 1 so ndị bụ isi ndị maara Andersons na ndị ga- nweta ụgwọ ọrụ kwa afọ site na ụlọ ọrụ wee jiri ọnụego mbelata ego yana usoro a. A mụrụ nwa agbọghọ na-ekwenye ekwenye, mana ụlọ ahịa na-enweghị atụ n'èzí anaghị akwụsị irere ndị enyi ya ruo ngwụcha 2018, ma ugbu a, ọ nwere ụlọ ahịa 160 + na-enweta isi abụọ. Ijeri dollar asatọ na ndị otu ahịa sonyekwara ịrị elu na 18 nde Ndị otu na njedebe nke 2018 REI dị ugbu a site na mgbọrọgwụ ya dị ala, mana n'ọtụtụ ụzọ, ọ dị ka ọ na-arapara n'arụ nke agbata obi enyi na-akwado ndị na-arịọ ndị otu ya na obodo ya, mana ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu, REI bụ ụkpụrụ omume na gburugburu ebe obibi maara na ọ dị ka ọ na-ese onwe ya ma ọ bụ nnukwu uto ya n'ime iri afọ ole na ole gara aga akọwapụtala nzube na ịba uru nke ndị otu na-emekọ ihe ọnụ na TheAnderson guzobere iji mepụta nkwekọrịta. op nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na azụmahịa ma ọ bụ ụlọ nke ndị obodo na-ahazi n'ime ebe obibi ndị otu a bụ ụdị ụdị nkwado na itinye ndị ahịa aka na mkpebi mkpebi iji gbochie usoro nlekọta nke ụlọ ọrụ na-ahụkarị, olee otu REI na otu o si arụ ọrụ N’ezie, ihe kpatara ihe ịga nke ọma ya n’ime afọ iri asatọ na abụọ gara aga bụ na mgbe ndị ahịa na-akwụ ụgwọ maka $ 20 ndị otu nọ ugbu a, ha ga-enweta ụgwọ ọrụ kwa afọ site na ụlọ ọrụ ahụ, nke afọ a bụ $ 200 , yana ikike ịme ntuli aka na nhọta ụlọ na akwụkwọ nke yiri ka ọ bụ ezigbo uru maka onye ahịa na-alaghachi na obere akpa ha na njedebe nke afọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ na onye ji ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'eziokwu ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ nnukwu ụlọ ahịa ndị na-ere ahịa nke ụdị ụdị a bụ ọdịiche dị mkpa ma dị mma, mana na nyocha nke ọma, akụkụ nke REI na-agbakọ n'otu akụkụ nke ụdị Co-op nke hapụrụ dịka Andersons na-emecha mgbe ụlọ ọrụ 1971 nwere nde mmadụ iri na asatọ, ọ dị ka ndị a nwere ike ndị na-azụ ahịa nwere nnukwu ego maka etu ụlọ ọrụ a si agba ọsọ, mana kemgbe 2005, ndị isi oche REI kwadoro mmetụta ya na ndị ahịa na-emeghị eme naanị site na ndị na-agba akwụkwọ naanị ha. maka oche oche ndị bụbu ndị otu na-akwụ ụgwọ US $ 4,000 Dollar kwa afọ ma bụrụ ndị na-ahụkarị n'èzí bụ ndị nwere ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe, dịka onye otu afọ iri na anọ na Hellrodrigues, mana ka ụlọ ọrụ ahụ gbasara mba ahụ na njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ ghọrọ ihe niile metụtara ya, ndị otu ahụ gafere ọrụ na 2018 -CEO na ndị ndụmọdụ ego dịka CEO Steve Coo kwa onye nọchiri onye ọ bụla nwetara $ 100,000 Onye bụbu Onye isi na Onye isi ala Jerry Stritzke nwetara ụzọ atọ abụọ nde US anọ dị iche, nke ahụ ụgwọ ọnwa nke onye ọrụ nọ n'ụlọ ahịa ahụ bụ dollar iri na iri na abụọ, ebe ndị ọrụ ahụ gara n'ihu na akụkụ nke REI-Koop dị anya site na ọchịchọ nke Ndị òtù e, n'ihi na mgbe ndị obodo niile nwere obere ikwu na ụlọ ọrụ ahụ, na ọ ga-abụ na ha nwere akụkụ nke ihe aha Coop pụtara, belụsọ n'èzí na karịa ndị na-azụ ahịa ọcha dị ka m bụ ndị na-eme ka echiche nke ịkwado na Mmemme ndị otu REI na-arụ ọrụ dịka mmemme iguzosi ike n'ihe na Costco karịa ụzọ dị mma iji gbasaa azụmahịa ọnụ.
Kedu ka nke a si emetụta usoro gburugburu ebe obibi na ụkpụrụ omume nke ụgbọ mmiri anyị? Dị ka ụlọ ọrụ ndị na-ama ya aka, REI na-achọ itinye onwe ya dị ka onye ndu na nkwado ụlọ ọrụ, na-eme ya n'ọtụtụ ụzọ, ụfọdụ n'ime ha na-aga nke ọma na ụfọdụ n'ime ha esoghị n'etiti omume ụlọ ọrụ kachasị mma, bụ site na ire nke akụrụngwa eji REI bụ onye ama ama maka naanị ndị ahịa na-ere ahịa ebe ha na-ere tọn anyị nke akụrụngwa na ọnụ ala dị ala yana ụlọ ọrụ ahụ na-amalite ilekwasị anya na usoro akụ na ụba okirikiri ọ na-ewepụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke na-ere ọtụtụ puku ihe akụrụngwa ejirila yana ihe mgbazinye. Ga njem a na-azụ ma na-ere ahịa n'èzí na-ekwe nkwa n'ihi na ọ bụghị naanị na-ewepu ihe ndị a na ebe a na-ekpofu ahịhịa, kamakwa ọ na-ewepụ mkpa ọ dị ịme uwe ọhụrụ, nke pụtara n'ikpeazụ iwepu mmetụta gburugburu ebe obibi nke mmepụta, mbupu na ihe mkpofu a na-apụghị izere ezere. Site na mmesi ike a na ịregharị na ịgbazinye ego, ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ zuru oke na ebumnuche ụlọ ọrụ nke ịghara iwepụta ihe mkpofu site na mbido 2020 ma ọ bụ iwepu 90% nke mkpofu site na mkpofu - ọ bụ ugbu a 2020 ma ha ezutabeghị ha ihe mgbaru ọsọ REI nwere atụmatụ a ugbu a na oge a kara aka maka ngwụcha 2020, tinyere ahịhịa na ihe, ha nyekwara $ 8.4 nde na ndị na-abụghị ndị na-enweghị uru na 2018 ma were aka na steeti na nke mba iji kwuo uche nke ndị America na ntụrụndụ dị n'èzí adịghị mma. h A ghaghi, mana ọbụlagodi ma ọ bụrụ na REI zụtara ume ọhụrụ site na ngwa ndị dị na mpaghara wee tinye ogwe ọkụ dị na mbara igwe ha, ha na-aga n'ihu na-ebute nsogbu nke uto nke REI kwa afọ CO2 nhapụta ihe ọkụkụ abawanyela ntakịrị kemgbe 2014 na mgbe ha jikọtara ndị ahịa na-eme njem maka njem njem ha REI Omume a na-apụghị ịgbagha agbagha, ya mere REI na-arụ ọrụ dị irè nke ibelata mmetụta ya na ịkwado nchedo ala ọha, mana ha bụ isi nee ds maka inweta ego na uto na-egbochi ihe mgbaru ọsọ ndị ahụ na nke ha na-eme ka ha gbanwee America nke na-enweghị obi ebere wee ghọta mkpa ọ dị ịkọwa onwe ha ma ghọta mkpa ọ dị ịmara ntakịrị iwe ọha na eze iji mee ka obi dajụọ n'oge a iwe ha nyere ha ntakịrị. tụfuo ihe ole na ole na anyị na ihe dị mwute bụ na ọ na - arụ ọrụ oge niile ọ na - ele anya Anand onye edemede anyị nke ndị mmeri na - ewe ihe niile na - enyocha etu ndị ọkachamara siri gbanwee, ihe ọ pụtara iweta mgbanwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe ọ na - ekwu ebe a dị mkpa Mgbe nyochaa ụlọ ọrụ ndị a na-ejikọtaghị ọnụ iji cheta na anyị ga-amata ọdịiche dị n'etiti anyị na mkpochapu g E-nri ma ọ bụ jeere nri nri niile, m bụ REI n'ihi na echere m na ọ dị mkpa idobe ụlọ ọrụ nha a n'ogo kachasị elu.
Kpọ onwe gị aco-op pụtara ime dị ka REI nke dị mma maka gburugburu ebe obibi na ndị na-eri ya ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ, mana barwe setịpụrụ maka azụmaahịa ụbọchị ndị a dị oke ala karịa REI dị ka ezigbo onye na-akwado, ọkara n'ihi na onye ọ bụla ọzọ na-eme obere , ọrụ nkwado ya dị mma, mana ọ gbadoro anya na ichedo mpaghara ọzara, nke bụ ihe ngwọta dị mma maka REI n'ihi na ọ bụ isi ihe ha dị ka ndị ọcha, ndị ahịa na-etiti na n'ihi na ọ na-ahụ na a ga-anọgide na-abụ ihe okike ebe ndị ahịa nwere ike iji akụrụngwa ha. REI dị na njedebe kachasị mma nke ụdị ọrụ ụlọ ọrụ, mana ọ ka dị na mpaghara ebe ụlọ ọrụ na-eji usoro omume eme ihe iji merie ọtụtụ ndị ahịa na n'ikpeazụ ahịa ndị ọzọ. Na nkenke, anyị emeela akụ na ụba ebe a na-ele bi'ness wetter anya dị ka ihe yiri nke a ga - eji dochie onye ọrụ gị hoputara ma ọ bụ na - eme mkpesa n'okporo ámá echiche ahụ bụ na mgbe ịzụrụ akwa uwe a, ụlọ ọrụ ị si na - azụta karịa, dabara nke ọma ịme ihe niile arụ ọrụ siri ike maka gị, mana eziokwu siri ike bụ na anyị enweghị ike ịzụta onwe anyị site na mgbanwe ihu igwe.
Ee, anyị na-eme mkpebi mgbe anyị ga-azụta ihe dị mkpa ụfọdụ ụlọ ọrụ dị mma karịa ndị ọzọ nke ahụ bụ naanị obere mmebe nke mgbaghoju anya nke ihu igwe, n'ihi na na njedebe nke ụbọchị, anya doro anya agaghị apụta enweghị mgbanwe ihu igwe. 'm egwu mgbe ọ na-abịa na-echeta okwuntughe nke ukwuu nke na echefuru paswọọdụ atụmatụ ihe ochie enyi, ma a ọnwa ole na ole gara aga, m na ike gwụrụ na-eke ọhụrụ okwuntughe otú ahụ ka m anya n'ihi na ngwa na-nwere ike mfe niile nke m okwuntughe n'otu ebe na achọtara m - Lee bụ ngwa ọrụ zuru oke iji gafere ịntanetị ngwa ngwa mgbe m ga-ewebata logins echedoro na okwuntughe ogologo okwute na agaghị m echeta - Lane nọ ebe ahụ mgbe m chefuru paswọọdụ m - Lane nọ ebe ahụ mgbe m chọrọ iji aka m mejupụta aha m ogologo na aha m - Lane dị ebe ahụ ma ihe niile m ga - eme bụ ịpị bọtịnụ ole na ole aracha, ọ dị nfe ahụ ma ọ na - arụ ọrụ na ngwaọrụ na nyiwe niile. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdị ka ebumnuche, pịgharịa wee webụ nwayọ na udo nke uche ịga - Lang comm / OCC maka nnwale ụbọchị 30 n'efu - Lanepremium.
Ná ngwụsị nke ikpe ahụ, ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya, jiri koodu ntinye OCC nweta 10% kwụsịrị ọcha. Daalụ maka ikiri edemede nke m setịpụrụ ndepụta email n'oge na-adịbeghị anya maka ndị nwere mmasị na email site n'oge ruo n'oge banyere ọnọdụ nke ọwa m ma ọ bụ ka ịdebe oge na mwepụta nke akụkọ m ọhụụ debe nkọwa n'okpuru yana ekele mgbe niile maka ikiri ma hụ ị n'ime izu abụọ
Rei ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ iji zụta n'aka?
EZEnwere ọnụ ahịa ndị ahịa nke 3.48 kpakpando site na nyocha 167 na-egosi na ọtụtụ ndị ahịa na-enwekarị afọ ojuju na ịzụta ha.EZEnọ n'ọnọdụ 126th n'etiti saịtị akụrụngwa n'èzí.
Gịnị mere igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ?
Otu n'ime ihe ndị kachasị akpata ego nkeigwebụ ihe. Carbon eriri na-abịa n’ụdị dị iche iche na akara ule. The elu àgwà nke carbon, nke ka ukwuu na-eri nke sourcing si emepụta. Ọ bụrụ naigwe kwụ otu ebeemeputa na-echepụta ya carbon, a na-eri ga-recouped na ire ere nke aigwe kwụ otu ebe.
Rei ọ dị oke ọnụ?
NaEZEotu otu nke $ 20 dị mma maka ndụ gị niile. Yabụ ọtụtụ afọ ị nwereEZEịbụ otu, nke na-eme ka ọ kwụsịlata ọnụ ahịa ya. Ọ bụrụ n ’ị na-azụta ihe karịrị $ 200, ọ na-akwụ onwe ya ụgwọ ozigbo. M na-na-na na na na na ole na ole narị ebu azụ kwa afọ na mEZENdị òtù.
Rey ọ bụ igwe nri?
REI bụ onye na-azụ ahịangalaba-op, na kasị ukwuu na mba ahụ. Dị ka ụfọdụ ndị ọrụ ịgbazinye ego na ngalaba nri, ndị otu ya nwere ndị ahịa ya. Ndi otu REI, nke nwere ihe kariri nde 5.5, kwụọ ụgwọ $ 20 otu oge iji sonyere.Ọkt 28 2015
Ndi otu REI bara uru?
NaOtu REIego nke $ 20 bụezike ofụri eyouwemotu. Yabụ ọtụtụ afọ ị nwereOtu REI, ihe na-erughị ya n'ezie na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ n ’ị na-azụta ihe karịrị $ 200, ọ na-akwụ onwe ya ụgwọ ozigbo. You chọghị nke gịOtu REIkaadị mgbe ịzụta, naanị nọmba ekwentị gị.
Rei ọ na-eme igwe kwụ otu ebe?
O di nwute na odighiahia igwe kwụ otu ebena mmemme dị n'oge a. Anyị hụrụ obodo anyị n'anya na-achọ ụzọ iji gbatịkwuo ndụ nke ngwaahịa ha ma jiri mmemme gia na-enyocha mgbe niile. Nwere ike ịchọpụta otu esi etinye aka na mmemme ịzụta azụ n'ọdịnihu ebe a. Daalụ maka iru eru!Mar 21 2020
You na-enweta REI dividend na igwe kwụ otu ebe?
Bikesruru eru n'ezienkewaego. N'ọnọdụ nkeigwe kwụ otu ebenagịedepụtara aha ya, ọ bụ ọnụahịa zuru oke n'oge a ma yabụ tozuru etozu.Eprel 24 2020
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe dị na REI?
Otutu igwe kwụ otu ebe na-enye Cannondale, mana enwekwara ụfọdụ ụdị ọmarịcha sitere na Diamondback, GHOST, Salsa, na akara REI nke Co-op Cycles DRT (Ma ọ bụ REI Co-Op Bikes). E jiri ya tụnyere igwe kwụ otu ebe, enwere obere igwe kwụ otu ebe REI dị na weebụsaịtị, mana nhọrọ ahụ ka na-amị mkpụrụ.
Ogologo ha hà ka wiil ndị ahụ na-agba n’elu igwe elu ugwu Rei?
Co-op bụ akara ụlọ maka REI. Locallọ ahịa REI dị na mpaghara anyị nwere ezigbo ndị ọrụ na ngalaba igwe kwụ otu ebe ha. Ha gosiri m ọtụtụ anyịnya igwe ndị na-abụghị akụkụ nke ngalaba Co-op, na ọtụtụ akụkụ ahụ dị ka ihe na-abịa na Co-op. Igwe ụkwụ ndị ahụ bụ sentimita 27.5 na ọ nwere ihe mgbago elu nke ihe dịka 74 centimeters ma ọ bụ 29 sentimita asatọ.
Kedu ụdị uwe ị na-enweta na REI?
Selectionlọ ahịa REI nhọrọ nke uwe igwe kwụ otu ebe, gụnyere mkpụmkpụ na uwe aka. Echefula ngwa ọrụ kachasị mkpa: okpu igwe igwe. Maka oge ezumike, tụlee onye na-enye ọzụzụ ịnya igwe. Nweta ndụmọdụ ndị ọzọ gbasara otu esi ahọrọ igwe kwụ otu ebe.